सिद्धार्थको मृत्युको बारेमा नयाँ खुलासा, मृत्युको कारण अर्कै – Classic Khabar
September 7, 2021 71
सिद्धार्थ शुक्ला अब यो संसारमा छैनन् । बिग बोसको १३ औं सिजनमा दर्शकहरुलाई मनोरञ्जन गर्ने सिद्धार्थले टिभीमा आफ्नो अभिनयले पनि मानिसहरुको मन जितेका थिए। तर अब यो विश्वास गर्न धेरै गाह्रो भैरहेको छ कि सिद्धार्थ अब यस संसार को एक हिस्सा छैनन् । यद्यपि त्यहाँ सिद्धार्थ को यादहरु छन् जो मानिसहरुको दिलमा बसेको छ ।
उनका करोडौं फ्यानहरु छन् । सिद्धार्थ को बिदाई बाट बलिउड कलाकार धेरै दुखी छन्। टिभी र बलिउडका धेरै सेलिब्रेटीहरु आफ्नो दुस् ख व्यक्त गर्दैछन्। यसैबीच अभिनेत्री राखी सावन्तले इन्स्टाग्राममा एउटा भिडियो सेयर गरेकी छिन्। भिडियोमा राखी निकै भावुक देखिएकी छिन्।
तर उनले भनेका कुरा निकै अचम्म लाग्दा छन् । उनले शिद्धार्थको निधन हृ’दयघा’तका कारण नभएको बताइरहेकी छन् । यो भिडियो मा उनी भन्छिन्, ुनमस्ते साथीहरु, म अझै घर मा छु। म कहीं बाहिर निस्कन सक्दिन। सिद्धार्थको मृत्युले मलाई बेचैन बनायो । सिद्धार्थको पोस्टमार्टम धेरै डाक्टरहरुले धेरै प्रकारले गरे ।
जसको समय साढे ३ घण्टा भन्दा बढी लाग्यो । डाक्टरहरुले सिद्धार्थको निधन हृ’दयघा’तका कारण भएको होइन भनेका छन् । के बाट थाहा भयो ? चेकअप को लागी धेरै चीजहरु पठाइयो। सोधपुछ गर्न। म धेरै चिन्तित छु। वास्तवमा के भएको हो ?
उनी भन्छिन्, उनको कारको शीशा पनि फु’टेको थियो थियो। उनको बिएम डब्लु कारको सिसा कसले फु’टायो ? उनी को संग विवाद पो गरेका थिए की ? उनी राती ८ वजे कसैलाई भेट्न बाहिर गएका थिए । घर फर्किएपछि उनले राती ३ वजे आमालाई भने की मलाई सञ्चो छैन । सिद्धार्थले खाएको औ’षधी के थियो ? वास्तविकता वाहिर आउनुपर्छ । उनले भिडियोमा भनेकी छन् ।
सेप्टेम्बर १ मा राती सिद्धार्थ एक औ’षधि खा’एर सुतेका थिए, तर रातको तीन बजे बेचैनीको कारण उनको आँखा खुल्यो। त्यतिबेला उनकी आमाले उनलाई पानी पिएर सुत्न भनिन्। यस पछि, जब सिद्धार्थ बिहान अलार्म बज्ने बित्तिकै उठ्न सकेनन्, उनकी आमालाई अनौठो लाग्यो । आमाले तुरुन्तै डाक्टरलाई बोलाइन् त्यसपछि सिद्धार्थलाई कूपर अस्पताल लगियो जहाँ डाक्टरले उनको मृत्युको पुष्टि गरे।
Prev३६ घण्टा नहुँदै संखुवासभा घट्ना प्रकरणकोमा प्रहरीलाइ मिल्यो सफलता !
Nextपिडित श्रीमानको बयान : ‘श्रीमतीले बच्चा पनि चाहिएन तपाईसंग पनि बस्न सक्दिनन् भनेर निस्किन’ (भिडियो सहित)
पाथीभरा माताले सबैको मनकामना पुरा गरुन , फाल्गुन २६ गते बुधबार , हेर्नुहोस तपाईको भोलीको राशिफल कस्तो छ ?